Qiimee Immisa Ayaad ku Iibsan Laheyd Lionel Messi? - iftineducation.com
Messi iyo Ronaldo
iftineducation.com – Marba marba ka dambeysa kubada cagta ayaa hor mar gaareysa ,waxaana laga dareemaya qimaha ay ciyaartooydu joogaan manta iyo halkii ay jogeen dhamdkii qarnigii 20 aad.
Chelsea ayaa gar goorineysa laacibka aduunka iyo kooxda Barcelona Lionel Messi waana sababta sheekadan.
Qiimaha ay doonayso in ay ku qaadato waa mid aan wali xidig kubbada cagta ciyaara aan lagu iibsan.
Roman Abramovich waa ninka iskale kooxda Chelsea mana,ahan nin ay lacagtu dhibto ,waxaana uu aaminsan yahay in uu Messi ku heli karo €250 million.
Laakin jariiradaha dhaqaalaha ka faaloota ee El Economista ayaa macalimiin iyo qaar kamid ah taagerayasha Barca weydiisay qiimaha lagu iibsan karo .
Messi waaba hadii la iibinaayo
Harry Redknapp waa tababaraha Tottenham waxaa uu Messi ku qiimeeyay in lagu iibsan karo €500 million.
Sir Alex Ferguson oo maamula Man United ayaa aminsan in Messi lagu gadan karo qiimaha ay joogaan 11-xidig oo mid walba uu ku fadhiyo €30 million taas oo noqoneysa €330 million,waana hal koox lacag lagu dhisi karo.
Pep Gurdiola macalinkii hore ee Barcelona oo isna la weydiiyay arintaan ayaa sheegay in uusan garaneyn lacag uu ku qimeeyo Messi,uuna rumeysan yahay in aysan jirin koox dhiibi karta lacagta maskaxdiisa ku jirta.
Taageerayasha Barca ayaa iyaguna sheegay qiimo kal dhuwan lakin isku cel celis ay sameysay El Economista ayaa muujinaya in ay aaminsan yihiin in lagu iibsan karo wiilkooda dahabiga ah aduun dhan €578.1m.